कोरोना खोप लगाउन डराए स्वास्थ्यकर्मी – Dainik Lumbini
कोरोना खोप लगाउन डराए स्वास्थ्यकर्मी
लुम्बिनी प्रदेशका पाँच हजार ६ सय ४४ जना स्वास्थ्यकर्मीले नै खोप लगाएनन् । सोमबारबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु
स्वास्थ्य सचेतनामा स्वास्थ्यकर्मीहरू अग्रपंक्तिमा हुनुपर्ने हो । तर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी नै डराए पनि सर्वसाधारण ससंकित बनेका छन् । खोपबारे सबै जानकारी पाउने स्वास्थ्यकर्मी नै खोप लगाउन डराएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच हजार ६ सय ४४ जना स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो चरणमा खोप लगाएका छैनन् ।
सरकारले अग्रपंक्तीमा खटिनेलाई पहिलो चरणमा खोप लगाएको थियो । तीमध्ये केही स्वास्थ्यकर्मी डराएका हुन् । खोप लगाउने चिकित्सकहरूका अनुसार डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालमा अहिलेसम्म खोप लगाएकै कारण कसैलाई जटिल समस्या भएको छैन् । स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरिले यो खोप नयाँ भएकोले केही नकारात्मक असर देखिन्छ कि भनेर डराए पनि रूपन्देहीमा दुई जनामा सामान्य ज्वरो बाहेक अरूमा केही असर नदेखिएको बताए ।
सरकारले दोस्रो चरणमा सोमबारबाट पत्रकार, कुटनीति नियोग र भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई खोप दिन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ७ वटा जिल्लामा लक्ष्यभन्दा धेरै कमले कोरोनाविरुद्ध पहिलो चरणको खोप लगाएका छन् । गत माघ १४ गतेबाट नेपालभर सुरु भएको पहिलो चरणको खोप अभियान २४ गते सकियो । यो अभियानअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा २८ हजार नौ सय ५१ जनाले खोप लगाएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ हजार पाँच सय ९५ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएको थियो । लक्ष्य लिएमध्ये खोप लगाउने यो संख्या ८४ प्रतिशत मात्रै हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ७ वटामा लक्ष्यभन्दा कमले खोप लगाएका छन् भने ५ वटा जिल्लामा लक्ष्यभन्दा बढीले खोप लगाएका छन् । प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको बढी प्रभाव देखिएको रूपन्देही, बाँके, बर्दियासँगै अर्घाखाँची, रोल्पा, गुल्मी र पूर्वी रूकुममा लक्ष्यभन्दा कमले खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा कम बाँकेमा जम्मा ६५ प्रतिशतले पहिलो चरणको खोप लगाएका छन् । बाँकेमा सात हजार सात सय जनालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखेकोमा चार हजार नौ सय ६७ जनाले मात्र खोप लगाएका हुन् ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणको धेरै जोखिम रहेको रूपन्देहीमा पनि लक्ष्यभन्दा ३३ प्रतिशत कमले खोप लगाएका छन् । रूपन्देहीमा १० हजार एक सय ५३ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको भए पनि ६ हजार सात सय ९१ जनाले मात्र खोप लगाएका छन् भने तीन हजार तीन सय ६२ जना खोप लगाउन गएनन् । बाँकेमा दुई वटा स्थानमा खोप केन्द्र तोकिएकोमा रूपन्देहीमा पाँच स्थानबाट खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यसैगरी अर्घाखाँचीमा ६९ प्रतिशत, पूर्वी रूकुममा ८२ प्रतिशत, रोल्पामा ९१ प्रतिशत, बर्दियामा ९८ प्रतिशत र गुल्मीमा ९३ प्रतिशतले खोप लगाएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै कोरोनाको बढी प्रभाव देखिएको दाङ र कपिलवस्तुसंगै पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी र प्यूठानमा लक्ष्यभन्दा बढीले खोप लगाएका छन् । दाङमा दुई हजार नौ सय ७० जनाले खोप लगाउने लक्ष्य लिएकोमा तीन हजार पाँच सय ४६ जनाले खोप लगाएका छन् । त्यस्तै पाल्पामा पनि दुई हजार सात सय १२ जनाले खोप लगाएका छन् । पाल्पामा दुई हजार चार सय ६० जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता रोशनलाल चौधरीले कतिपय जिल्लामा थोरै र कतिपय जिल्लामा धेरै लक्ष्य निर्धारण गरिएकोले लक्ष्यभन्दा धेरै र थोरै खोप लगाएको देखिएको बताए । खोप लगाउनुपर्नेहरू डराएर नभई जिल्लाहरूले लक्ष्य तोक्दा नै बढी र कम तोकेर पठाउँदा लक्ष्यभन्दा तलमाथि भएको देखिएको चौधरीको भनाइ छ ।
तर खोप अभियान सुरु हुँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अरू स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक खोप लगाउन तयार नभएपछि अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.राजेन्द्र खनाल आफैले खोप लगाएर अभियानको सुरुवात गरेका थिए । डा. खनाल र केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो दिन लगाएको खोपको कुनै नकारात्मक असर नदेखिए पनि दोस्रो र तेस्रो दिनदेखि बल्ल खोप लगाउनेहरूको संख्या बढ्न थालेको थियो । भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोभशिल्ड खोपमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा ३९ हजार चार सय ९५ जनालाई दुई डोज पुग्ने गरी आठ हजार सात सय ६८ भाइल खोप आएको थियो ।
पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शववाहनका चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिनेहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । सोही अनुरूप १४ गतेदेखि २४ गतेसम्म सम्बन्धित जिल्ला अस्पताल तथा तोकिएका खोप केन्द्रमार्फत खोप लगाइएको थियो ।
देशका सबै जिल्लामा १४ गते एकैपटक खोप अभियान सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको भए पनि लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा भने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेवास्ताका कारण सुरु हुन सकेको थिएन । पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरूलाई पुनः ४ हप्तापछि दोश्रो डोज खोप लगाइने छ । पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई खोप केन्द्रमा दिइएको कार्डका आधारमा दोश्रो डोज लगाईने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।